Ugu yaraan 14 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 14 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
March 22, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo ka dhacay meel u dhow huteel kuyaala Muqdisho galabta oo Khamiis ah, sida ay sheegeen masuuliyiin katirsan dowladda.
Kabtan Maxamed Xuseen ayaa wakaalada wararka AP u sheegay in qaraxu uu ka dhacay meel u dhow huteel Weheliye oo kuyaala wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama. Wadada ayaa bartilmaameed u ahayd wakhtiyadii lasoo dhaafay maleeshiyada Al-Shabaab.
Intooda badan dadka khasaaruhu soo gaaray ayaa ahaa dad wadada marayay iyo ganacsato, sida Kabtan Maxamed Xuseen uu u sheegay AP. Tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa sheegay afhayeenka Wasaaradda Amniga Cabdicasiis Xildhibaan.
Al-Shabaab ayaa mar walba weeraro ku qaada meelaha sar sare sida huteelada iyo bar kantaroolada milatariga. Qarax gaari oo dhacay bishii Oktoobar ayaa lagu dilay 512 qof, kaasoo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa. Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay.
Qaraxa galabta oo Khamiis ah ayaa imaanaya qiyaastii labo bilood kadib markii labo qarax oo gaari ay ka dhaceen Muqdisho oo ay ku dhinteen ugu yaraan 21 qof.
Soomaaliya ayaa u halgamaysa sidii ay u la dagaalami lahayd xagjiriinta Al-Shabaab.
Milatariga Mareykanka, ayaa kordhiyay dadaalada ka dhanka ah Al-Shabaab sanadkii lasoo dhaafay iyaga oo geystay duqaymo diyaaradeed.
March 18, 2017 Soomaaliya oo ku eedaysay xulufada Sucuudi Caraabiya hoggaamiyo duqeyn loo geystay dooni oo ay ku dhinteen qaxooti Soomaali ah
March 13, 2017 Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho